OnePlus သည် 3GB OnePlus 128T ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး OnePlus5၏ပထမဆုံးစတီယာရင်ကိုထုတ်ဝေသည် Androidsis
ယခုသီတင်းပတ်ကုန်အထိ 3GB OnePlus 12T ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ပေါ်တယ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းကိုတရားဝင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြည့်ရသည်မှာ OnePlus အတွက်ကိုယ်စားလှယ်ကကုမ္ပဏီကဤသို့ပြောခဲ့သည် ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် OnePlus 128T ၏ 3GB မော်ဒယ်ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်: ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် OnePlus ဟာသူ့ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေကို“ တစ်ခုတည်းသောစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခု” အပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီနွေရာသီမှာလာမယ့် OnePlus5ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
OnePlus သည် 3GB OnePlus 64T ကိုဆက်လက်ရောင်းချနေသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းတွင်စတော့ရှယ်ယာအမြောက်အမြားကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်မော်ဒယ်များမလာမချင်းလအနည်းငယ်အကြာတွင်ရှိနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
OnePlus 5, ယခုအချိန်အထိလူသိများသည်
ယခုအပတ်တွင် OnePlus သည်၎င်း၏ Weibo အကောင့်တွင်၎င်း၏လာမည့်အထင်ကရနေရာအတွက်ပထမဆုံးစာသားကိုတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလှောင်ပြောင်စကားလုံးနှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်Hello 5” ထိုအခါထောင့်တစ်ထောင့်ရှိ OnePlus လိုဂို။
OnePlus5ပဟေ.ိ
ဖြစ်နိုင်သမျှသည် နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ OnePlus5တွင် terminal အသစ်သည်ယခင်မော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့ ၅.၅ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင်ရှိသော်လည်း Quad HD resolution နှင့်အတူ Qualcomm ၏ Snapdragon 5.5 processor နှင့်6GB သို့မဟုတ် RAM ကို 8 GB.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, OnePlus5ကိုလည်းပေါင်းစပ်ဆောင်ကြဉ်းရန်မျှော်လင့်နေသည် ကင်မရာနှစ်ခု ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာ 12 megapixels resolution တပ်ဆင်ထားပြီးလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့် 3600mAh ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားပါတယ် Dash အားသွင်းခြင်း 2.0.
OnePlus 3T ကဲ့သို့ပင် OnePlus5တွင် 64 GB နှင့် 128 GB သိုလှောင်မှုနေရာ (သို့မဟုတ် 128 GB နှင့် 256 GB) ရှိသည့်ဗားရှင်းများရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ (ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ် dual-camera) တို့အပေါ် မူတည်၍ ယူရို ၅၀၀ ထိထိနိုင်သည်။ သိုလှောင်မှု, etc) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus သည် 3GB OnePlus 128T ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး OnePlus5၏ပထမဆုံးစာသားကိုထုတ်ပြန်သည်
Google ၏အဆိုအရ Android O beta မကြာမီထွက်ပေါ်တော့မည်
Qualcomm မှ Snapdragon 660 နှင့် 630 ပရိုဆက်ဆာအသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်